KEDU KA ESI EDOZI NCHEKWA DISKI NA DATA NIILE NA WINDOWS? - AZỊZA AJỤJỤ - 2019
Ọtụtụ mgbe n'ọtụtụ ntụziaka, tupu imelite ọkwọ ụgbọ ala ma ọ bụ wụnye ngwa ọ bụla, akwadoro ịme ndabere iji weghachi kọmputa iji rụọ ọrụ, Windows. Aghaghị m ekweta na otu aro ahụ, mgbe mgbe, m na-enye ...
N'ozuzu, na Windows, enwere mgbidi arụ ọrụ (ọ bụrụ na ị gbanyụghị ya,) mana agaghị m akpọ ya nnukwu ihe ndabere ma dị mma. Na mgbakwunye, a ga-ahụta na nkwado dị otú ahụ agaghị enyere aka na ikpe ọ bụla, gbakwunye na nke a na ọ na-eweghachị data efu.
N'isiokwu a, m ga-achọ ikwu banyere otu n'ime ụzọ ndị ga-enye aka mee nkwado ndabere nke ndabere nke diski ike niile na akwụkwọ niile, ọkwọ ụgbọala, faịlụ, Windows OS, wdg.
1) Gini ka anyi choro?
1. USB flash drive ma ọ bụ CD / DVD
Gịnị kpatara nka? Cheedị, ụfọdụ ụdị njehie emeela, Windows anaghịzi ebugharị - naanị ákwà ngebichi na-egosi na ọ bụ ya (site na ụzọ, nke a nwere ike ime mgbe ike mberede na-adịghị emerụ ahụ) ...
Iji malite usoro mgbake ahụ, anyị ga-achọ ngwa ngwa mberede ngwa ngwa (ma ọ bụ disk, ọ bụ naanị ụgbọala mgbagwoju anya) na otu usoro ihe omume ahụ. Na ụzọ, ọ bụla USB flash mbanye dị mma, ọbụna ụfọdụ ochie otu maka 1-2 GB.
2. Software maka ndabere na mgbake
N'ozuzu, ụdị usoro a dị nnọọ ukwuu. Onwe m, M gwaro ka ị lekwasị anya na Acronis True Image ...
Ebe nrụọrụ weebụ: http://www.acronis.com/ru-ru/
Uru dị mkpa (na usoro nke backups):
- ndabere ngwa ngwa nke disk diski (dịka ọmụmaatụ, na PC m, akụkụ usoro nke disk Windows 8 na ihe niile na akwụkwọ na-ewe 30 GB - usoro ihe omume ahụ mere otu "ezigbo" a na ọkara otu awa);
- mfe na nkwekọrịta nke ọrụ (nkwado zuru ezu maka asụsụ Russian + interface interface, ọbụna onye novice ọrụ nwere ike ijikwa);
- ihe dị mfe nke okike ma ọ bụ disk;
- akwụkwọ nchekwa nke diski ike na-ejikọta ya site na ndabara (dịka ọmụmaatụ, akwụkwọ mgbochi HDD bụ 30GB - a na-ejikọta ya na 17 GB, ya bụ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ugboro 2).
Nanị ihe nkwụghachi azụ bụ na a kwụrụ ụgwọ ahụ, ọ bụ ezie na ọ bụghị ọnụ (Otú ọ dị, enwere ule oge).
2) Ịmepụta akụkụ nke nchekwa nke diski ike
Mgbe ị na-etinye ma ọ bụ na-akwado Acronis True Image, ị ga-ahụ ihe dị ka windo a (ọtụtụ na-adabere na usoro nke usoro ihe omume ị ga-eji na screenshots nke mmemme 2014).
Ozugbo na ihuenyo mbụ, ịnwere ike ịhọrọ ọrụ nkwado. Anyị na-amalite ... (lee nseta ihuenyo n'okpuru).
Ọzọ, windo na ntọala gosipụtara. N'ebe a, ọ dị mkpa iburu n'uche ihe ndị a:
- Disks nke anyị ga-eji dochie akwụkwọ (ebe ị na-ahọrọ, ana m akwado ịhọrọ usoro diski + disk nke Windows depụtara, lee nseta ihuenyo n'okpuru).
- ezipụta ọnọdụ na diski ike ọzọ ebe nchekwa ga-echekwa. Ọ bụ ihe amamihe dị na ịchekwa ndabere na draịvụ ike dị iche iche, dịka ọmụmaatụ, gaa na mpụga (ha dị ugbu a na-ewu ewu na ọnụ ọnụ.)
Wee pịa "Archive" ozugbo.
Malite usoro nke ịmepụta otu. Oge okike dabeere nnọọ na diski diski ahụ, otu nke ị na-eme. Dịka ọmụmaatụ, a na-echekwa 30 GB ngwa ngwa na minit 30 (ọbụna obere obere, minit 26-27).
Na usoro nke ịmepụta ndabere, ọ ka mma ịghara ijikwa kọmputa na ọrụ ndị ọzọ: egwuregwu, ihe nkiri, wdg.
Site n'ụzọ, a bụ nseta ihuenyo nke "kọmputa m".
Na na nseta ihuenyo n'okpuru, a ndabere nke 17 GB.
Site na ime nkwado ndabere mgbe niile (mgbe ọtụtụ ọrụ gasịrị, tupu ịwụnye mmelite dị mkpa, ndị ọkwọ ụgbọala, wdg.), Ị nwere ike ịghọkwu ma ọ bụ na-ejighi n'aka banyere nchekwa nke ozi, na n'ezie, arụmọrụ nke PC.
3) Mepụta nkwado ndabere flash iji na-agba ọsọ usoro mgbake
Mgbe nchekwa disk dị njikere, ịkwesịrị ịmepụta mberede ụgbọala mkpegharị ọzọ ma ọ bụ diski (ọ bụrụ na Windows jụrụ ịkwọta; na n'ozuzu ya, ọ ka mma iji weghachite ya site na ịpịpụta na USB flash drive).
Ya mere, anyị na-amalite site na ịga na nchekwa na mpaghara iweghachite ma pịa "mepụta bọtịnụ ndị nwere ike ịmepụta ihe".
Mgbe ahụ ịnwere ike itinye niile igbe (maka ọrụ kachasị elu) ma nọgide na-emepụta.
Mgbe ahụ, a ga-ajụ anyị ka anyị gosi onye agha ahụ ebe a ga-edekọ ozi ahụ. Anyị na-ahọrọ windo USB USB ma ọ bụ diski.
Ntị! A ga-ehichapụ ozi niile na flash drive n'oge ọrụ a. Echefukwala idetuo faịlụ ndị dị mkpa site na windo mbanye.
N'ezie ihe niile. Ọ bụrụ na ihe niile na-aga nke ọma, mgbe ihe dị ka nkeji ise (ihe dịka) ozi ga-egosi na ọ bụ nke ọma ka e mepụtara usoro mgbasa ozi.
4) Weghachite site na ndabere
Mgbe ịchọrọ iweghachi data niile site na ndabere, ịkwesịrị ịhazi BIOS ka ị buo site na USB flash drive, tinye USB flash drive n'ime USB ma malitegharịa kọmputa ahụ.
Iji ghara ikwughachi ya, m ga-enye njikọ na isiokwu ahụ maka ịtọlite ​​BIOS iji bulie site na windo mbanye:
Ọ bụrụ na buut site na windo mbanye na-aga nke ọma, ị ga-ahụ window dị ka nseta ihuenyo dị n'okpuru ebe a. Gaa usoro ihe omume ahụ ma chere ka ọ rụọ.
Ọzọkwa na mpaghara "mgbake", pịa bọtịnụ "search for backup" - anyị na-achọta diski na nchekwa ebe anyị zoputara ndabere.
Ọfọn, nzọụkwụ ikpeazụ bụ iji pịa nri na-achọ (ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ) ma malite ọrụ iweghachite (lee nseta ihuenyo n'okpuru ebe a).
Nke ahụ niile. Ọ bụrụ na Acronis anaghị akwado gị n'ihi ihe ọ bụla, ana m atụ aro ịṅa ntị na ndị a: Paragon Partition Manager, Paragon Hard Disk Manager, Master EdeUS Partition.
Nke ahụ niile, ihe kacha mma!